China Enwere Ike ịgbanwu China Manufacturers & Suppliers & Factory
Enwere Ike ịgbanwu - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Enwere Ike ịgbanwu)
60W N'èzí n'ọdụ ụgbọ mmiri na-ekpuchi ọkụ
Ejiri Oghere Ndị Na-ere Garage 60W nyepụta mmepụta lumen dị elu 6600lm site na 110lm / w. Ọdịdị nke Ụlọ Elu Igwe Mmiri a na-ewuli ya elu, ọ ga-eju gị anya maka ókè ebe mkpuchi dị. Ogologo elu anyị n'èzí edepụtara maka awa 50,000. Nnukwu quanlity na-acha ọkụ, UL mma LED ọkwọ ụgbọala na elu mma aluminum lampshade...
ihe nduzi na-eduzi ihe dịka 130w 5000k 16900lm
ihe nduzi na-eduzi ihe dịka 130w 5000k 16900lm Ụlọ ọrụ gas anyị na- eme ka ọkụ ọkụ na- eji mma iṅomi 3030 Diana Chip, nwere ike iguzogide mgbochi dị elu ma kesaa ìhè. Nke a Led Petrol Station Lighting na- eji ọkwọ ụgbọala dị elu, nke na-egosi CE ROHS abd afọ atọ. Anyị Dugara Retrofit kanopi Ìhè eji ọhụrụ duru...
75W 5 afọ akwụkwọ ikike ada ìhè n'elu
75W 5 afọ akwụkwọ ikike ada ìhè n'elu Ọ dịghị mkpa iji aka na-arụ ọrụ 75W na-eduzi Post Top ìhè dị ka igwe na-arụ ọrụ na chi foto na-achọpụta ìhè iji gbanwee ya ozugbo. Ẹkot na omenala 250W ìhè fixtures, a 75W mmetụta mere post n'elu nye gị onye ike ịrụ ọrụ nke ọma 9750lm super elu nchapụta na oji pụtara ìhè...
Enwere Ike ịgbanwu Enwere ike ịgbanwu Enwere ike ịgbanwu 100W Enwere ike ịgbanwu ọkụ Enwere ike ịgbanwu ọkụ 150w Enwere ike ịgbanwụrụ ọkụ Ebube nwere ike ịgbanwu ọkụ 150w Enwere ike ịchọta Amazon